Waxaa la oggolaaday in video dib loo eego - BBC News Somali
Waxaa la oggolaaday in video dib loo eego
Image caption Guddoomiyaha FIFA, Gianni Infantino
Guddiga xiriirka caalamka ee kubbadda cagta waxaa uu ansixiyay tijaabooyin video ah oo garsoorayaasha ka ciyaaraha caawinaya gaarista go'aannada muhiimka ah. Teknoolojiyadan waxaa lagu tijaabin doonaa ciyaaro kooban muddo labo sano ah.
Isticmaalka dib u soo celinta video-ga si loo arko wixii khalad ka dhacay garsooraha waxay ku koobnaan doontaa marka uu garsooruhu xukminayo in gool uu dhashay iyo in kale, inay tahay in rigoore la dhigo iyo in kale, inay tahay in ciyaartoy la saaro iyo in kale ama marka ay dhacdo in garsooruhu uu laba ciyaartoy isku khaldo kii khaladka sameeyay.
Guddoomiyaha FIFA, Gianni Infantino waxaa uu sheegay inay tahay go'aan taariikhi ah ee kubbadda cagta.
Waxaa uu sheegay in sport-gu uu muujiyay inuu taageerayaasha iyo ciyaartoyda warkooda dhegeysanayo. Teknoolojiyada sheegaysa in gool uu dhashay iyo in kale waxaa horeba loogu adeegsanayay tartamada waaweyn qaarkood.
Galabta ayaa u dambaysay ciyaartii dhexmartay Tottenham iyo Arsenal ee barbardhaca min labo gool ku dhammaatay mar ayaa Tottenham ku doodday inay gool dhaliyeen laakiin teknooljiyadu waxay sheegtay in goolhayuhu uu kubbadda celiyay intii aysan xariiqda dhaafin.